जनगणनामा सोधिँदै भाषादेखि खातासम्म « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
थाहा अनलाइन १ आश्विन २०७८, शुक्रबार ०७:४३ मा प्रकाशित
काठमाडौं । कात्तिक २५ गतेपछि तपाईँको घरमा कोही नयाँ मान्छे आएर ‘तपाईँको बैक खाता छ कि छैन ?’ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा ऋण लिनुभएको छ कि छैन ?’ भनेर पनि सोध्न सक्छन्। प्रश्न सोध्ने अरू कोही नभई राष्ट्रिय जनगणनाका खटिएका गणक हुनेछन्। उनीहरूले तपाईँको पुर्खाको भाषा कुन हो ? जागिरको खोजी गर्नुभएको छ छैन ? भन्नेलगायत पनि जिज्ञासा राख्नेछन्।
सङ्घीयतापछि पहिलो पटक हुन गइरहेको जनगणनामा १२ वटा नयाँ प्रश्न थपिएका छन्। विगत सय वर्षअघि भएका जनगणनामा सोधिएका भन्दा भिन्न प्रश्न हुनेछन्। नेपालमा १९६८ बाट जनगणना सुरु भएको हो। जुन बेला चन्द्रशमशेर प्रधानमन्त्री थिए। प्रत्येक १०र१० वर्षमा जनगणना गरिन्छ।
अबको जनगणनामा ८० वटा प्रश्नावली छन्। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक नेवीललाल श्रेष्ठले सङ्घीयतापछिको पहिलो जनगणना भएकाले १२ नयाँ विषयवस्तु समेटिएको जानकारी दिए। यो जनगणनामा भाषाको विषय प्रमुखताका साथ राखिएको छ।
उनका अनुसार विगतमा मातृभाषा र दोस्रो भाषाको विषय मात्रै थियो। अब भाषासम्बन्धी ३ प्रश्न छन्। ‘मातृभाषा, दोस्रो भाषा र पुर्खाको भाषा कुन हो ? भन्ने प्रश्नावली छ,’ महानिर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘जन्म दर्ता विषयले प्रवेश पाएको छ।’
हरेक परिवारको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका खाता भएर नभएको, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा लिएर नलिएको सम्बन्धी प्रश्न पनि सोधिनेछ। घर बस्नका लागि हो वा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि हो ? भन्ने पनि विवरण सङ्कलन गरिँदै छ। घर पनि सिनेमा हल हो कि ? व्यापारिक कम्प्लेक्स वा उद्योग, कलकारखानाको हो वा वासस्थानका लागि हो रु भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि खोजिँदै छ। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।